#PenshoppeMyanmarLiveSale - BajarFB.com
Penshoppe • 1 year ago 59 327 • 1.1K Views
Penshoppe Live Sale မှာ တူတူဝယ်ကြ၊ ကံစမ်းကြမယ်ဟေ့...
ဒီတစ်ပတ်လည်း 50% အကြမ်းစားကြီးတွေနဲ့ Men ရော ၊ Ladies Item တွေအလုံး...
Penshoppe1 year ago
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသော 🎊နေ့လေး မှာ အရမ်း တန် ပြီး သိပ်လှ တဲ့ items လေးတွေကို ရောင်းချပေးမယ့် Live sale လေ;ကိုမကြာခင်စပါတော့မယ် နော်🎈🎈🎈
😊Like and Share 👌👌လုပ်ပေးတဲ့ သူတွေထဲက (၃) ဦးကိုလည်း😍😍😍
👉5000 တန် PENSHOPPE Gift Voucher
Giftway အစီအစဉ်လေးမှာ ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ..❤️❤️❤️
1. ဒီ live sale လေးကို like လုပ်ပေးပါ ..
2. ကိုယ့် wall မှာ ✌️✌️✌️#PenshoppeMyanmarLiveSale လို့ရေးပြီး သူငယ်ချင်း ၃ ဦးနှင့်အထက် tag တွဲကာ Public နဲ့ share ရုံပါပဲ (တကယ်လို့ သူငယ်ချင်း ၃ ဦးကို tag မထားဘူးဆိုရင်တော့ လက််ဆောင်လေးတွေ ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်)🎁🎁🎁
ယခု 🗓Live Sale အတွင်း မှာ ဝယ်ယူအားပေးကျတဲ့ customer များထဲမှ5ဦးကိုလဲ Penshoppe ရဲ့❤️❤️❤️
prizes - 10000 gift vouchers👍
✌️Gift Voucher5ဦး ကို မဲလေးနိူက်ပီး ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
5 ဦး မဲဖောက်ပေးမှာဆိုတော့ အများကြီးကံကောင်းမယ့် အခွင့်အရေးအများကြီးဘယ်နော်❤️❤️❤️❤️❤️
ဒါးကြောင့်ချက်ချင်းဝယ် ချက်ချင်းပေါက် မှာဖြစ်လို့ live လေးကို ပြီးဆုံးအောင် ကြည့်ပြီအားပေးပါဦးနော်😍😍😍
ယခု Live Sale အတွင်း ဝယ်ယူအားပေးကျတဲ့ customer များကိုလဲ Delivery Free ဖြင့် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ပို့ဆောင်ပေးပါတယ် ရှင့်...(car)✈️📦🚘🚖🛵🚞
Penshoppe ဆိုင်ခွဲလေတွေကတော့ ရန်ကုန်မြို့ မှာ ရှိတဲ့
😍Junction city, 😍Myanmar Plaza နှင့် 😍Times City တို့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော် ။
ဆိုင်တွေကိုတော့ မနက် ၉နာရီ မှ ည ၉နာရီအထိဖွင့်လှစ်ထားသလို အချိန်မကုန်လူ မပင်ပန်းစေ ဖို့ 😍Online ကနေ လညး် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ် နော်❤️❤️❤️
MPT ရဲ့ MPT Club အဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင် ယခု Live လေကို LIKE & SHARE လုပ်ပြီ Screenshot ယူလိုက်ပါ။
ပြီရင်တော့ Chatbox မှာ Screenshot🤔 လေပို့ပေးပြီ MPT ရဲ့ PROMO CODE လေကို chat box တောင်ယူပေးပါနော်
MPT Club 100 points ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရေအတွက်မကုန်ခင် အမြန်ဆုံးရယူဖို့တော့လိုမယ်နော်😊😊😊
ဟုတ်ကဲ့ ပါပါတယ်ရှင့် တစ်ခုချင်းစီပြသွားပေးမှာဖြစ်လို့ live လေးကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးပါဉီးနော်
M14	XS	7 29,900 10% 26,910
S	9 29,900 10% 26,910
M	8 29,900 10% 26,910
L629,900 10% 26,910
XL	3 29,900 10% 26,910
M1	S 29,900 50% 14,950
XL 29,900 50% 14,950
Give away အစီအစဉ်လေးမှာ ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ..❤️❤️❤️
❤️သီတင်းကျွတ်အတွက် PENSHOPPE က 70% OFF အထိ အကြမ်းစား Live Sale ကြီး လာပြီနော်❤️ ❤️Live ကိုအဆုံးထိ စောင့်ကြည့်ပြီ Gift Voucher တွေယူဖို့မမေ့နဲ့နော်🎁
Junction City တစ်ဆိုင်လုံး 50% OFF ထက်ဝက်တွေကို အကုန် ချလိုက်ပါပြီ... ဖိနပ်၊ အင်္ကျီ၊ ဂျင်း နဲ့ အိတ်တွေ၊ wallet ၊ ရေမွှေး ကြိုက်တာ ကြိုက်သလိုဝယ် တစ်ဆိုင်လုံး 50% ရှိနေတုန်း စိတ်ကြိုက်သာသွားပြီး ဝယ်ခဲ့တော့... ဒီတခါ 50% က အမိုက်စားတွေချည်း အကုန်ပါတယ်နော်... တချက် ကြည့်လိုက်တော့😉 #PenshoppeMyanmar #PenshoppeJunctionCity
PENSHOPPE Live Sale ကြီး လာပြီနော်! ❤️သီတင်းကျွတ်အတွက် ဈေးမကြီးဘဲ up to 70% ထိ အကြမ်းစား ချထားတဲ့ Penshoppe itemsတွေကိုအားပေးဖို့ Live အဆုံးထိ စောင့်ကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်!
သီတင်းကျွတ်အထူး လက်ဆောင် ငွေ 29,900 ကျပ်တည်းနဲ့4မျိုး Surprise Gift Box ကြီး! မကြာခင် သီတင်းကျွတ်ကာလရောက်ပြီ! ဒီနှစ်တော့ ငွေအများကြီး ကုန်ခံစရာမလိုဘဲ တစ်Box တည်းနဲ့ အားလုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့ လက်ဆောင်လေးတစ်ခုကို ဖေဖေ၊ သူငယ်ချင်း၊ ချစ်သူ စတဲ့ ချစ်ခင်ရသောအမျိုးသားများကို ပေးချင်လား? ဒါဆို အင်္ကျီတစ်ထည်၊ ရေမွှေးတစ်ဘူး၊ Hair Wax တစ်ဘူးနဲ့ ဦးထုပ်တစ်လုံ...
🛑Hello...Myanmar Plaza မှာ Area တစ်ခုလုံး 50% OFF 😎 ကဒီနေ့နောက်ဆုံးနော် ❤️ 🛑Myanmar Plaza က PENSHOPPE Thadingyut Special Sale ကြီးကို တချက်ကြည့်လိုက်ပါဦး... 🛑Myanmar Plaza ထဲဝင်တာနဲ့ Promotion Area ကြီးထဲမှာ ဟော့သည်လို PENSHOPPE ရဲ့ Item အားလုံး 50% OFF Sale ကြီး ရှိနေပြီနော်! October 8 ရက်နေ့ထိဆိုတော့ အခုဘယ်လာပြီး မြန်မြန် ဝယ်လိုက်တော့နော်😉 #PenshoppeMyanmar #ThadingyutSpecialsale
Hello...70% ထိချမယ့် PENSHOPPE Live Sale ကြီး လာပြီနော်!🎁🎁🎁 ဒီတစ်ခါ ပါမှာကတော့ ယောက်ျားလေးတွေရော ၊ မိန်းကလေးတွေရော မလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်ရမယ့် အသစ်တွေပါတယ်😍 ပြီးတော့ 70% ထိ အကြမ်းစား ချထားတဲ့ Penshoppe itemsတွေကိုအားပေးဖို့😊 Live အဆုံးထိ စောင့်ကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်❤️ #PenshoppeMyanmar
PENSHOPPE Myanmar Plaza Thadingyut Sale
Hello...70% ထိချမယ့် PENSHOPPE Live Sale ကြီး လာပြီနော်! Live အဆုံးထိ စောင့်ကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်! #PenshoppeMyanmar #PenshoppeLiveSale